Uma abapholayo intombazane obonisa kangako ungase ulingeke ukuba baphonse in the ithawula. Ungase ube omunye njalo ukuqalisa contact ephathekako njengokuthintana ezigudle, cuddling, noma kissing. Nakuba lona yamukele ekhombisa yakho uthando, Ubonakala ngingakhululekile eziqalisa lezi ukushukuma eyedwa. Uma athungathe lokhu date yakho futhi phazamisa wena, thatha isinyathelo manje ukuze ugweme ukungezwani okungadingekile ebuhlotsheni bakho.
Chaza Imizwa Yakho
Kubalulekile ukuqonda ukuthi intombi yakho akakwazi ukufunda ingqondo yakho futhi kungenzeka nakwazi kanjani ukuziphatha kwakhe okukuthinta. Isazi Relationship, Dr. Karen Sherman ugcizelela ukuthi kubalulekile ukutshela intombi yakho ukuthi uzizwa kanjani. Mhlawumbe, Ukuziphatha kwakhe unaffectionate oshiye wena ababezizwa wasenqaba, ukusuka kwakhe, ekhungathekile, noma ngisho engathandeki. Noma kungenxa, bayasondela wakhe eceleni ingxoxo sína futhi basho kanjani izenzo zakhe zikuthinta.
Ngemva kokuba usubakhiphile zokuqwashisa yini ekukhathaza, kuba isikhathi sokumba ngijule. Buza imibuzo ukuze basize ukuhlonza umnyombo ukuziphatha intombi yakho. Kungenzeka waba ebuhlotsheni odlule lapho izinsuku zakhe abazange zidinga eziningi uthando. Ngaphezu kwalokho, uma ubuhlobo bakho namanje kahle entsha, angase badinga isikhathi esengeziwe zishise kuwe kanye nezimfuno ubuhlobo. Uma ababili kini wasiveza izizathu okungenzeka for yokuntula uthando, bafake izindlela nobabili ungaba izidingo zakho wahlangana.
Khumbula, kufanele aveze imizwa intombi yakho ngendlela evamile kuwe, ngisho uma engayi bangasabeli kubo. Esihlokweni sakhe esithi "10 Timphawu Abantu Highly obunothando", Dr. Kory Floyd libala izinzuzo eziningi ekuboniseni njengokuthi ephakeme ukuzethemba, ukwesaba kancane ubuhlobo, nokuqinisela okukhulu ekucindezelekeni. Ukwengeza, Abacwaningi Andrew Gulledge, Michelle Gulledge, noRobert Stahmann wabonisa ukuthi uthando kwandisa ubuhlobo ukwaneliseka bobabili abangane bomshado. Naphezu ukungabi intombi yakho uthando, nokuvuleleka yakho siqu abonisane uthando ikuvumela ukuba wengeze kulezi imiphumela emihle futhi babe nobudlelwane ngcono esikhathini esizayo.
Yenza Isinqumo Esinzima
Kungase beze iphuzu lapho uyaqaphela ukuthi, naphezu kwemizamo intombi yakho umhlabeleli, wena namanje anganeliseki in the ubuhlobo. Dr. Sherman uthi esibalulekile kakhulu kunoma yibuphi ubuhlobo ukufunda ukwamukela omunye umehluko yomunye. Uma uthola ukuthi ukuntuleka intombi yakho uthando uyaqhubeka ukukuhlupha, kungaba ngcono ukuba nihlukane ngemfudumalo futhi uthole umuntu agcwalise isidingo sakho uthando.